10 Reasons to Invest in Your Career ﻿
မိမိရဲ့ career လမ်းကြောင်းအတွက် မိမိကိုယ်ကို ဘာကြောင့် invest လုပ်ထားသင့်သလဲ . . . ?
စာဖတ်သူတို့ရဲ့ ဘဝရည်မှန်းချက်များကို ရရှိအောင်မြင်နိုင်ဖို့အတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်တတ်မှုရှိခြင်းဟာ လွန်စွာအရေးကြီးလှပါတယ်။ စာဖတ်သူတို့အနေနဲ့ မိမိတို့ရဲ့ career လမ်းကြောင်းဖြောင့်ဖြူးစေဖို့အတွက် မည်မျှအထိ တွေးတောစဉ်းစားမှုများကို ပြုလုပ်ခဲ့ဖူးပါသလဲ?
မိမိကိုယ်မိမိ လုံလောက်စွာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများပြုလုပ်မထားခြင်းဟာ ရေစီးသန်တဲ့မြစ်တစ်စင်းအတွင်း လှော်တက်မရှိပဲ လှေလှော်နေရသကဲ့သို့ဖြစ်စေပြီး career လမ်းကြောင်းတိုးတက်ရေးအတွက် လှော်တက်သဖွယ် အသုံးဝင်စေမည့် လုံလောက်တဲ့အသိပညာ၊ ရည်မှန်းချက်များမရှိပါက လိုရာပန်းတိုင်သို့ ရောက်ရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ လက်ရှိအချိန်မှာတော့ မိမိကိုယ်ကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ပြုလုပ်ထားခြင်းမရှိသော်လည်း ခေတ္တခဏအဆင်ပြေနေနိုင်သေးပေမယ့် တစ်ချိန်ချိန်မှာ ဒီလို မိမိကိုယ်ကို ကောင်းမွန်စွာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းက သင့်ကို နောင်တအကြီးအကျယ်ရသွားစေနိုင်ပါတယ်။
ဒီလိုအဖြစ်အပျက်မျိုးတွေနဲ့ မတွေ့ကြုံရစေဖို့အတွက် မိမိဘက်က ကြိုတင်ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ career လမ်းကြောင်းတိုးတက်မှုရှိရေးနှင့် ဘဝရဲ့ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များအတွက် အခုကတည်းကစဉ်းစားပြီး ပြင်ဆင်ထားနိုင်ဖို့ investment plan တစ်ခုကို ရေးဆွဲထားဖို့ လိုအပ်နေပါပြီ . . .
မိမိကိုယ်ကိုယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများပြုလုပ်ထားဖို့ဟာ ဘာကြောင့်အရေးကြီးသလဲဆိုတာကို ကွဲကွဲပြားပြားသိရှိနိုင်ဖို့အတွက် အောက်ပါအချက်ကလေးတွေကိုလည်း ဖတ်ရှုကြည့်လိုက်ကြရအောင် . . .
၁။ မိမိကိုယ်ကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြုလုပ်ခြင်းဟာ အကျိုးအမြတ်အများဆုံး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်
မိမိကိုယ်ကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများပြုလုပ်၍ တိုးတက်မှုများရှိစေရန် ဆောင်ရွက်ထားခြင်းကြောင့် ပြန်လည်ရရှိလာနိုင်တဲ့ အကျိုးကျေးဇူးများဟာ သင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြုလုပ်လိုက်ရတဲ့ တန်ကြေးထက်ကို ပိုပါတယ်။ ဒီကဲ့သို့ပြုလုပ်ထားခြင်းအားဖြင့် သင့်ဘဝတစ်လျှောက်တွင် ငွေကြေးရှာဖွေနိုင်စွမ်း (ဝန်ထမ်းဖြစ်စေ၊ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်စေ) တိုးတက်လာမှာဖြစ်သလို ယခင်က စိတ်ကူးထဲတောင် ထည့်ခွင့်မရခဲ့တဲ့ အခွင့်အလမ်းတွေကိုလည်း အရယူနိုင်မှာဖြစ်ပြီး မိမိကိုယ်ကို အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ခြင်းမှ ကာကွယ်နိုင်ရန်နှင့် မိမိရဲ့တစ်ကိုယ်ရည်တိုးတက်မှုနဲ့ အောင်မြင်မှုအသီးအပွင့်များကို ခံစားနိုင်ရန်အထိ များစွာသောအကျိုးကျေးဇူးများကို ပြန်လည်ရရှိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၂။ သင်ကိုယ်တိုင်ဟာ သင့်ရဲ့ သူဌေးပဲဖြစ်ပါတယ်
အကယ်၍ သင်ဟာ “သင်” ဆိုတဲ့ ကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့ CEO တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုပါက သင့်ရဲ့လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု ရပ်တန့်မသွားရေးဟာ သင့်ရဲ့တာဝန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့ ကြီးပွားတိုးတက်မှုနဲ့ အောင်မြင်မှုတို့ဟာ သင့်အပေါ်တွင် မူတည်နေတဲ့အတွက် သင့်အနေနဲ့ သေချာစွာ ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်ခြင်း၊ အလုပ်ကြိုးစားမှုရှိခြင်းနဲ့ မိမိရဲ့ ရည်မှန်းချက်များအတိုင်း ရရှိအောင်မြင်နိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ခြင်း သင့်ရဲ့ ကုမ္ပဏီတွင် ပြန်လည်၍ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို ပြုလုပ်ခြင်းတို့ကို အစဉ်အမြဲပြုလုပ်သွားရမည်မှာ သင့်ရဲ့တာဝန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သင့်ကိုယ်သင် ကုမ္ပဏီသူဌေးတစ်ဦးအဖြစ်သို့ မှတ်ယူ၍ “သင်” ဆိုတဲ့ ကုမ္ပဏီကြီးမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို ပြုလုပ်ထားလိုက်ပါ။
၃။ မိမိရဲ့တန်ဖိုး ပိုမိုမြင့်တက်လာခြင်း
သင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ အကြောင်းအရာများကို ရေးသားဖို့အတွက် balance sheet (၂) ခုကို ရေးဆွဲလိုက်ပါ။ ပထမ list တွင် သင့်ရဲ့ လက်ရှိငွေကြေးပိုင်ဆိုင်မှုအခြေအနေနဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ချရေးပါ။ ဒုတိယ list မှာတော့ သင့်ရဲ့ ကျွမ်းကျင်မှုများ၊ အကြံအစည်များ၊ အသိပညာများ၊ သင့်ရဲ့ အလုပ်တစ်ခုကို ရနိုင်ခြေ (တနည်းအားဖြင့်) လုပ်ငန်းရှင်များအနေနဲ့ သင့်အားအလုပ်ခန့်ရန် ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ခြေ၊ သင့်ရဲ့ အဆက်အသွယ်များ (personal networks)၊ ဝါသနာပါတဲ့အရာများနဲ့ ကိစ္စတစ်ခုခုကို ပြီးမြောက်အောင်မြင်စွာဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်း အစရှိသည်တို့ကို ချရေးလိုက်ပါ။ မိမိရဲ့ တစ်ကိုယ်ရည်တန်ဖိုးကို တိုးတက်လာစေရန်အတွက် အထက်ဖော်ပြပါ ဒုတိယ list တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို ပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပြီး ဒီလိုပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါက သင့်ရဲ့ ပထမ list ပေါ်ရှိ ပိုင်ဆိုင်မှုများဟာ အလိုအလျှောက်တိုးတက်မှုရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။
၄။ သင်ဟာလည်း အောင်မြင်သူတစ်ဦးဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်
သင်လည်းပဲ အောင်မြင်သူတစ်ဦးဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့အများစုဟာ ကျွန်ုပ်တို့စွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်များရဲ့ တစိတ်တပိုင်းကိုသာအသုံးချလေ့ရှိကြပြီး ဒီအရာမျှနဲ့ ကျေနပ်နေတတ်ကြပါတယ်။ ဒါဟာ ကောင်းမွန်တဲ့ အမူအကျင့်တစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး။ မိမိတို့ကျွမ်းကျင်တဲ့ (ပါရမီရှိတဲ့) အရာများကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်ပြီး ဒီနယ်ပယ်များတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို ပြုလုပ်ပေးခြင်းအားဖြင့် သင်တို့ရဲ့အောင်မြင်မှုကို အရယူလိုက်ပါ။
၅။ မိမိရဲ့ ရည်မှန်းချက်များအတိုင်း အောင်မြင်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း
သင့်ရဲ့ career နဲ့ သင့်ဘဝ ရည်မှန်းချက်များအတွက် သင့်အနေနဲ့ ဆုတောင်းတာထက်ပိုပြီး လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ကောင်းစွာစီမံခန့်ခွဲမှုမရှိတဲ့ career တစ်ခုဟာ မိမိတို့ရဲ့ သက်ဆိုင်ရာ ဘဝရည်မှန်းချက်များမှ ပိုမို၍ဝေးကွာသွားစေနိုင်ပါတယ်။ သင့်ကိုယ်သင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို ပြုလုပ်ပေးခြင်းအားဖြင့် ဘဝရည်မှန်းချက်များကို အောင်မြင်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ခြေကို တိုးမြှင့်ပေးနိုင်မှာဖြစ်သလို မိမိတို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်များနဲ့ ပိုမို၍ နီးကပ်မှုရှိလာစေမှာဖြစ်ပါတယ်။
၆။ မိမိတို့ရဲ့အနာဂါတ်ကို မိမိကိုယ်တိုင်ဖန်တီးပုံသွင်းနိုင်ခြင်း
သင့်ရဲ့ career လမ်းကြောင်းကို ပုံဖော်ဖို့အတွက်ဟာ သင့်ထံတွင် တာဝန်ရှိပါတယ်။ မိမိကိုယ်ကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို ပြုလုပ်ထားခြင်းအားဖြင့် မိမိရဲ့အနာဂါတ်ကို မိမိတို့စိတ်ကြိုက်ပုံဖော်နိုင်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ အင်အားနဲ့ အထောက်အကူပြုပစ္စည်းများ (အသိပညာ၊ အတတ်ပညာ) ကို ရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများပြုလုပ်ရာတွင် စွန့်စားခြင်းဟာလည်း တစိတ်တပိုင်းပါဝင်နေပြီး ဒါဟာ အောင်မြင်မှုရရှိ၍ ဘဝတလျှောက်လုံး ပျော်ရွှင်မှုရှိစေရေးအတွက် သင့်ဘက်ကပေးဆပ်ရမယ့် တန်ဖိုးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
၇။ သင့်အပြင် သင့်ရဲ့အသိုင်းအဝိုင်းအတွက်ပါ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကိုပြုလုပ်ပါ။
သင့်အနေနဲ့ အရာရာတိုင်းကို အကုန်မသိနိုင်သလို အရာရာတိုင်းကိုလည်း သင်တစ်ယောက်တည်းလုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် သင့်ကိုသင်ကြားပေးနိုင်မယ့်သူများ၊ လမ်းပြပေးနိုင်မယ့်သူများနဲ့ သင့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်များကို ရရှိအောင်မြင်စေဖို့ အကူအညီပေးနိုင်မယ့် သူများအပေါ်တွင်လည်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကိုပြုလုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။
၈။ ဘဝဟာ အလယ်အလတ်လောက်မှာ စိတ်ကျေနပ်ပြီးရပ်တန့်နေဖို့အတွက် တိုတောင်းလွန်းပါတယ်။
အလယ်အလတ်လောက်တွင် စိတ်ကျေနပ်ပြီးရပ်တန့်မနေလိုက်ပါနဲ့ မိမိကိုယ်ကို တိုးတက်မှုရှိစေရန်ပြုလုပ်ခြင်း (သို့မဟုတ်) သင်အားနည်းတဲ့ နယ်ပယ်များအတွက် အခြားသူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကို ခိုင်းစေခြင်း တစ်ခုခုကိုရွေးချယ်လိုက်ပါ။ သင့်အနေနဲ့ ကိစ္စတစ်ခုခုကို ကောင်းစွာလုပ်နိုင်စွမ်းရှိ/ မရှိ ဆိုတာကို ဆုံးဖြတ်ပြီးတာနဲ့ လိုအပ်ပါက အကူအညီရယူလိုက်ပါ။
၉။ သင်အသက်ကြီးလာတဲ့အခါ . . .
ယခုအချိန်မှာ စာဖတ်သူတို့အနေနဲ့ ဒီအချက်ကိုပူပန်စရာလိုဦးမှာမဟုတ်သော်လည်း “အချိန်က စကားပြောသွားလိမ့်မယ်” ဆိုတဲ့စကားက တစ်ကယ်ကိုမှန်ပါတယ်။ တစ်ချိန်ချိန်မှာ သင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ ပြဿနာများနဲ့ အောင်မြင်မှုများကို ပြန်လည်ကြည့်ရှုလိုက်တဲ့အခါ သင်နေထိုင်ခဲ့ရတဲ့ ဘဝအခြေအနေ၊ ရရှိခဲ့တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေ၊ လွှတ်ချခဲ့ရတဲ့ အရာတွေ၊ သင်မည်မျှအထိ ပျော်ရွှင်မှုရရှိခဲ့သလဲ၊ သင့်အနေနဲ့ ဘယ်အရာတွေကို အမွေအနှစ်အဖြစ် ချန်ရစ်ခဲ့နိုင်သလဲဆိုတာတွေကို ပြန်လည်၍ တွေ့မြင်လာရမှာဖြစ်ပါတယ်။ မိမိကိုယ်ကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမပြုလုပ်မိခဲ့တာကို ထိုအချိန်ကျမှ နောင်တရနေလို့ အပိုပါပဲ။ ဒါကြောင့် ငယ်စဉ်ကတည်းက မိမိကိုယ်ကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို ပြုလုပ်ပြီး မိမိတတ်စွမ်းသရွေ့ အကောင်းဆုံးကြိုးစား၍ ဘဝကို နေထိုင်ဖြတ်သန်းသွားလိုက်ပါ။
၁၀။ သင့်ကိုယ်သင်သာ ကိုးကွယ်ရာ . . .
မိမိတို့ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်များနဲ့ အောင်မြင်မှုများရဲ့ ရလာဒ်ဟာ သင်တစ်ဦးတည်းနဲ့သာ သက်ဆိုင်ပါတယ်။ အခြားသူများက သင့်ရဲ့ကျရှုံးမှုများအတွက် သင့်လောက်ဆုံးရှုံးနစ်နာမှုများရှိလာမှာမဟုတ်သလို သင့်လောက်လည်း သင့်အောင်မြင်မှုရဲ့ အသီးအပွင့်များကို ခံစားရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ငယ်ရွယ်စဉ်မှာကတည်းက မိမိတို့ရဲ့ ဘဝလမ်းကြောင်းအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများကို ပြုလုပ်ပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို ပြုလုပ်ထားသင့်ပါတယ်လို့ ပြောကြားရင်း နိဂုံးချုပ်လိုက်ပါရစေခင်ဗျာ။
ဒီ article လေးဟာ စာဖတ်သူတို့အတွက် အကျိုးရှိစေလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်